Jordania Henderson tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
rehetraMpilalao Football any BelzikaMpilalao Football KroasiaMpilalao Football FootballMpilalao Football FootballMpilalao baolina kitra frantsayMpilalao Football AlemaninaMpilalao Football any ItalianaMpilalao Football FootballMpilalao Football FootballMpilalao Football Swiss
Tantara momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza miampy fiankinan-dahatsoratra momba an'i Untold
Manuel Akanji Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Jordania Henderson tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Ny fotsy Yaya Touré". Ny tantaran-jatovo momba ny tantaram-pitiavan'i Jordan Henderson momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra saingy tsy dia misy vitsy no mihevitra ny momba ny tantaran'i Jordan Henderson Biografia tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Jordania Brian Henderson dia teraka tamin'ny andro 7 tamin'ny 1990 tamin'ny volana jona tao Tyne and Wear, Sunderland, Royaume-Uni avy amin'ny renin'i Liz Henderson (mpampianatra momba ny fampakaram-bady) ary rain'i Brian Henderson (polisy misotro ronono).
Jordania dia nianatra tany amin'ny College Sports Community Farringdon. Nandao an'i Sunderland izy tamin'ny naha tanora azy (taona 6). Samy mpankafy Sunderland avokoa ny Jordan sy ny ray aman-dreniny.
Tamin'ny taona 7, kely i Jordania dia nanomboka niasa ho mpikamnana sy mpihaza iray. Izy dia niova fo niova fo ho an'ny mpandray anjara afovoany afovoany, ny anjara toerany dia nitohy mandra-pahalehibeny.
Izy dia ampahany manan-danja amin'ny pejy Black Black U18 izay nahitana lohateny an-dalam-pivoarana.
Tamin'ny Janoary 2009, Henderson dia nanatevin-daharana ny klioban'ny Championship Coventry City nandritra ny iray volana. Taorian'ny nisamborana ratra iray, dia nipoitra tao amin'ny Sunderland tamin'ny taon-dasa 2009 ny sakaizany tamin'ny taolana fahadimy fahadimy tamin'ny tongony.
Tamin'ny 9 June 2011 dia nafindra i Henderson Liverpool ho an'ny sanda tsy voavaha, heverina fa eo amin'ny £ 16 sy £ 20 tapitrisa. Izy no lasa kapitenin 'i Liverpool tao amin' ny 2015 taorian 'ny nandaozany azy Steven Gerrard. Ny ambiny araka ny filazany dia tantara ankehitriny.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Jordania dia avy amin'ny fianakaviana Sunderland antonony. Ny rainy, Brian dia polisy misotro ronono iray izay nilalao baolina tao amin'ny tobin'ny baolina kitra tao Durham.
Brian Henderson dia nanambara ny fomba nitazonany ny tsiambaratelony momba ny homamiadana - mba tsy hisarihana ny fampisehoana an-tsehatry ny zanany. Voan'ny aretina izy tamin'ny volana novambra, 2013 raha nahita fitsaboana tao amin'ny tendany ny dokotera. Io fahitana io dia natao rehefa nesorina ny cyst. Ny fitsapana hafa dia nanambara fa voan'ny kanseran'ny tendany izy ary misy tsaho ao amin'ny lelany.
Brian Henderson dia nanemotra ny fampandrenesana ny vaovao tamin'ny zanany lahy mpilalao baolina nandritra ny vanim-potoana manan-danja tamin'ny faran'ny taom-pilalaovana farany, satria ny Reds dia nametraka fanamby an-tsoratra tsy nampoizina tamin'io taona io.
Nolazainy tamin'ny zanany lahy talohan'ny tokony handefasany ny fandidiana ny tendany sy ny lelany amin'ny volana voalohany amin'ny 2014. Taorian'ny nandalovany ny vaovao mampalahelo, nangataka an'i Jordania i Brain mba tsy hatahotra, fa tokony hifantoka amin'ny fametrahana olona maro amin'ny lalao amin'ny lalao tahaka izay azony atao.
Hoy i Brian, izay teraka avy tamin'ilay aretina tatỳ aoriana: "Fotoana tena nampihetsi-po tokoa izany raha tsy maintsy nandrava ny vaovao tamin'ny fianakaviana aho."
rENY: Ny maman'i Jordan Henderson, Liz dia mpampianatra matihanina.
Jord Henderson-Liz Henderson
Ankoatra ny fikarakarana ny reny, Liz Henderson dia tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina amin'ny zanany lahy, Jordania. Ny fiheverany matihanina dia hita amin'ny fitondran'ny zanany sy ny tahan'ny asa.
Jordania dia manana rahavavy tanora antsoina hoe Jody Henderson.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Raha ny fiainany manokana, i Jordania dia tsy misotro, mifoka sigara na milalao. Fitiavana iray ihany no tohanany nandritra ny androm-piainany. Tsy iza izy fa Rebecca Burnett mahavariana.
Jordan Henderson sy Rebecca Burnett vadiny.
Manana zanakavavy tsara tarehy izy ireo, Elexa Henderson.
Fiainam-pianakaviana Jordan Henderson
Ny Brendan Rodgers indray dia nanafay ny zava-bitan'i Henderson taorian'ny nahaterahan'ny vadiny faharoa. Ireo mpitsikilo mena dia nandany ny alina nanatrika ny nahaterahan'i Alba zanany faharoa talohan'ny niverenany hiverina hitarika ny ekipany handresy any Wembley. Tsaroany ny nilaza tamin'ny dokotera hsopital ... "Raha vantany vao mivoaka ny zaza, dia hiverina aho"...
Ireo izay tena akaiky ny fianakaviany dia mahafantatra fa manana fiainana lavorary lavorary amin'i Jordana i Rebecca Burnett. Ireto manaraka ireto dia i Jordan Henderson sy Rebecca Burnett vadiny handeha hiantsena any Manchester alohan'ny 2017 Christmas.
Jordana Henderson maka vady ho an'ny tsena Krismasy
tahaka Roberto Firmino ary Philippe Coutinho, Dia tsotra sy mahitsy ny fitiavany ny fiainany sy ny fitiavany.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Nanaja ny fanajany an'i Giggs izy
Jordana raha zazakely dia nilaza fa nihaona izy Ryan Giggs eo amin'ny tora-pasika Majorcan any Espaina. Ao amin'ny teniny."Tsaroako tsotsotra fa tena tanora aho. Tsy heveriko fa nahatsiaro izany mihitsy izy. Heveriko fa tena modely ho ahy i Ryan Giggs. Mahita olona maro ao amin'ny taratasy ianao noho ny antony diso saingy miaraka amin'i Giggs izay tsy henonao mihitsy momba azy. "
Tsy nanaja an'i Jordania i Jordania Giggs taorian'ny nanamafisany ny tatitra ratsy momba ny Manchester United Legend izay nanao raharaha momba ny vadin'ny zandriny. Nanomboka teo dia lasa fahavalo izy na dia teo aza ny habakabaka.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Car Choice
Jordania dia manana alika mifikitra amin'ny Range Rover izay famantarana ny fahaizany, Luxury & Reputation.
Jordania Henderson's Range Rover
Backthen, Jordania dia nampiasa fiara nitondra fiara ambany kokoa. Ity misy sary tranainy amin'ny Bebo tranainy indrindra an'ny Maestro, amin'ny voninahiny rehetra.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny Areti-maso tsy azo antoka
Nampahafantarina an'i Jordan Henderson indray mandeha fa tsy misy fanafody ara-pahasalamana noho ny ratra nahazo vatana izay nanery azy handalo telo volana amin'ny vanim-potoanan'ny 2015 any Liverpool. Nolazaina fa tsy maintsy miaina miaraka amin'ny alahelony mandritra ny androm-piainany sisa izy.
Namaky metatarsal teo amin'ny tongony havanana izy nandritra ny fiofanana.
Hoy i Henderson tao anatin'ny fanaintainana;
"Tena sarotra be ilay izy, tsy ho ahy fotsiny fa ho an'ny mpiasa ihany koa. Miaraka amin'ny metatarsal ahy, dia fantatro tsara ny karazana fotoana tsy maintsy halehako. Saingy amin'ny tongotro dia tsy misy fotoam-paharetana, tsy misy fanasitranana. Izany no faritra sarotra indrindra. Sarotra be izany. Nanaiky aho hitondra izany fanaintainana izany mandritra ny androm-piainako. "
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voampanga ho nihoatra ny vola
Damien Comolli, talen'ny baolina kitra mpilalao baolina taloha izay niaiky ny hamerenana ny £ 20m ho an'i Henderson indray mandeha dia nanambara fa nanamafy ny tenany tamin'ny radio nasionaly fa handripaka azy ny klioba, satria natahotra ny fanasoniavan'i Henderson fa diso ny vola.
Izany dia nitranga taorian'ny niandohan'i Jordan Henderson tamin'ny fanombohana ny fanombohana an'i Liverpool. Tamin'izany fotoana izany, i Jordana dia nanakaiky ny namoahan'i Rodgers. Ny mpilalao baolina kanto mahatsikaiky dia nanodina fifindra-monina ho any Fulham - taorian'ny nampidirany tao amin'ny fifanarahana fifanakalozana ho an'ny Clint Dempsey.
Henderson kosa dia nandavaka ny tongony ary nanizingizina fa tsy handeha na aiza na aiza. Fanapahan-kevitra iray izay nohamarinina tamin'ny farany. Ny fahafahana mibebaka avy amin'ny mistery dia nanjary ny alahelony hatramin'ny fahazazany.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mandefa Ekipa hafa
Ary koa ny baolina kitra, Henderson koa dia nanao tsara tamin'ny baolina badminton sy ny latabatra, na dia nisy tahotra aza izy mety tsy hahatonga ny kilasy ho mpilalao baolina satria izy dia voan'ny aretina, Osgood-Schlatters.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Style of Play
Henderson dia mpilalao baolina baolina lavalin'ny baoritra ary heverina ho mpilalao miasa mafy ary mitondra hery amin'ny ekipa. Voasoratra amin'ny "Mpilalao baolina matihanina amin'ny atletika sy miasa mafy" Henderson dia nanamboatra ny lalao nandritra ny fotoanany tao Liverpool ho mpilalao mahay kokoa. Ankoatr'izany, manohy manongotra ny sehatra foana izy rehefa be ny fanoherana.
Jordania no voalohany tamin'ny taona 17 izay ho voatonona ao amin'ny ekipa ligin'ny premier league ekipa amin'izao fotoana izao.
Izy no voatonona ao amin'ny gazetiboky 442 ambony 20 eo ambanin'ny mpilalao 21 manerantany miaraka amin'ny olona tahaka azy Messi, Fabregas, Agüero, Nani, Bojan, Benzema, Pato ary Walcott.
Tsy isalasalana, i Jordan dia azo antoka fa handeha ho lasa Legiona Liverpool.
Daty navaozina: 28 jona 2020
Daty navaozina: 20 jona 2020
Odsonne Edouard Tantaran'ny Ankizy Miampy Plus Untold Biography Facts
Daty navaozina: 15 jona 2020
Hamza Choudhury tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa
Danny Rose ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra